जलविद्युत‍्‌बाट समृद्ध बन्दै नारच्याङ - गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
जलविद्युत‍्‌बाट समृद्ध बन्दै नारच्याङ
फाल्गुन ४, २०७६ घनश्याम खड्का
(म्याग्दी) — अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा अवस्थित नारच्याङ्ग बस्तीको शिर माथिबाट झर्ने छहराले सौन्दर्य मात्रै थपेको छैन । फाँटभरि सिंचाइ सुविधा पुर्‍याएको छ । कुटानी, पिसानी मिल पनि सञ्चालित छ ।
अन्नपूर्ण र निलगिरि हिमालको फेदीमा अवस्थित गुचुमुच्च मगरबाहुल्य बस्ती नारच्याङवासीको पछिल्लो ७ वर्षयता जीवन शैलीमा ब्यापक परिवर्तन आएको छ । हिंउँदमा वेसी र वर्षायाममा लेक उक्लने नारच्याङवासीको दैनिकी फेरिएको छ । खेर गएको पाखापखेरा र ढुङ्गे वगरको मूल्य अकासिएको छ । परम्परागत ढुङ्गेघर विस्थापित हुँदै आधुनिक आरसिसि भवन बन्न थालेका छन् । भान्सामा जौ/गहुँ/कोदोको ढिँडो र आलुको परिकारको सट्टा भात, मासु र तरकारी पाक्न थालेको छ । घर–घरमा टिभी, हात–हातमा मोबाइल छन् ।
नारच्याङमा पछिल्लो समय आरसिसि घरको संख्या बढी छ । वस्तीसम्म मोटर बाटोको पहुँचले सिमेन्टको सहज ढुवानी र जंगलबाट काठ बोकेर ल्याई घर बनाउनु भन्दा आरसिसि घर धेरै सस्तो परेपछि घर ठडिएका हुन । कालीगण्डकी नदीले छोडेको बगर भएकोले जता खने पनि ढुङ्गा र बालुवा प्रशस्त पाइन्छ । जलविद्युत् आयोजनाको कारण क्रसर उद्योग छेवैमा बनेपछि गिटीवालुवाको पनि समस्या छैन ।
‘हाइड्रो प्रोजेक्ट नारच्याङ आएपछि सबै बस्तीमा सडक पुग्यो, पाखोबारीले राम्रो मूल्य पायो । आम्दानी ह्वात्तै बढेपछि परम्परागतको सट्टा नयाँ घर बनाउन सुरु भयो,’ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्नपूर्ण गाउँपालिका संरक्षण समितिका अध्यक्ष रहेका स्थानीय तेजबहादुर गुरुङ्गले भने, ‘ढुंगेघर बनाउन भन्दा आरसिसि घर बनाउन सजिलो र सस्तो र आधुनिक पनि भएकोले सहरीकरण उन्मुख छ ।’
धौलागिरि र अन्नपूर्ण, निलगिरी हिमालको बीचमा कालीगण्डकी नदीको निरन्तर कटानले बनेको संसारकै सर्वाधिक गहिरो ‘अन्धगल्छी’ अवस्थित नारच्याङ्ग गाउँमा ५ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दी परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ । ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला आयोजना अन्तिम चरणमा छ । त्यसैगरी नारच्याङमै ६२ मेगावाटको निलगिरि क्यास्केट, ३८ मेगावाटको निलगिरिखोला र ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला हाइड्रोपवार आयोजनाले प्रवेशमार्ग निर्माण थालेका छन् । निलगिरि क्यास्केट टनेल निर्माण तयारीमा छ । छुट्टै १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ ।
‘हाईड्रोबाट नारच्याङबासी आर्थिक तथा भौतिक क्षेत्रमा राम्रो लाभ पाएका छन् । खेर गएको जग्गाले मूल्य पायो, अनकन्टार भूगोलको अशिक्षित बस्तीमा गुल्जार नै आएको छ,’ साबिक नारच्याङ गाविसका अध्यक्ष देउजित पुनले भने, ‘स्थानीयलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र संस्कृति संरक्षणमा सहयोग दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा भविष्यप्रति आशा दिएको छ ।’ निर्माणाधीन आयोजनामा करिब ५ सय बढी स्थानीयले नियमित सीप र क्षमताअनुसारको रोजगारी पाएका छन् । ३ विद्यालयमा २/२ जनाको दरले शिक्षकको तलबभत्ता, अन्य खेलकुद मैदानसमेत पूर्वाधारमा सहयोग, आमा समूह, युवा क्लबले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग पाएका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको घलेम्दी हाइड्रोमा ३ सय बढी स्थानीयले हैसियतअनुसार १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म संस्थापक सेयर लगानी गरेका उनले बताए ।
सानाठूला आधा दर्जन बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र केही प्रक्रियामा रहेकाले नारच्याङ ‘हाइड्रो भिलेज’ भनेर पनि परिचित हुन थालेको छ । नारच्याङ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा हाइड्रोपावर कम्पनीले धमाधम काम सुरु गरेपछि स्टक ब्रोकरहरू गाउँमा आएर आईपिओ, एफपिओसमेत सेयरमा कसरी लगानी गर्ने सम्बन्धी तालिम नै सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
नारच्याङ हाइड्रो हब मात्र होइन, विश्व चर्चित अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने आकर्षक पर्यटकीय बस्ती पनि हो । नारच्याङमा पर्ने लुकेको यस पदमार्गलाई अन्नपूर्ण हिमालको पहिलो आरोही फान्सेली नागरिक मौरिस हर्जोगको नाममा नामाकरण गरिएको छ । फान्सेली पर्वतारोही मौरिस हार्गोजको टोलीले नर्थ बेस क्याम्पहुँदै ७० बर्ष ८ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण गरेका थिए । उनै पर्वतारोही मौरिसले हिंडेको बाटो सुधार तथा मर्मतपछि छोटो र सजिलो बनाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पदमार्ग पहिचान, सुधार र प्रवर्द्धन गरी प्रचलनमा ल्याएको हो । प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:३४
जटिल क्षयरोगका बिरामी बढे
हालसम्म देशका ८० ठाउँमा मात्रै जटिल क्षयरोग पत्ता लगाउने उपकरण छन्, दुर्गमका बिरामीको पहुँचमा यो सेवा उपलब्ध छैन
फाल्गुन ४, २०७६ फातिमा बानु
काठमाडौँ — जोरपाटीका ३४ वर्षीय एक पुरुषलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया बस्दाबस्दै खोकी लागिरहने र ज्वरो आउने भयो । तीन महिनासम्म उनले नेपालबाटै किनेर लगेको दुखाइ कम गर्ने औषधि खाएर बसे । ‘औषधि खाएको एकैछिन व्यथा कम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘केही घन्टामा फेरि उस्तै लगातार खोकी लाग्थ्यो ।’
ज्वरोले थलिएर कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनी गत फागुनमा नेपाल फर्किए । छातीको एक्सरे र खकार जाँच गराउँदा क्षयरोग पत्ता लाग्यो । रोग पनि सामान्य होइन, जटिल प्रकारको क्षयरोग अर्थात् बहु औषधि प्रतिरोधी (एमडीआर) ।
सामान्य खालको क्षयरोग भएको भए उनी ६ महिना औषधि खाएर निको हुन सक्थे । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार जटिल क्षयरोग निको हुन उनलाई आठ महिना दैनिक रूपमा सुई लगाउनुपर्छ र एक वर्ष ६ महिना एक दिन पनि नछुटाई औषधि खानुपर्छ । ‘मलाई यो रोग कसरी कोबाट कसरी सर्‍यो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘मलेसिया हुँदा एउटै कोठामा सात जनासम्म सुत्नुपर्थ्यो । खोक्ने, ज्वरो आइरहने साथी पनि थिए । त्यहीँ कसैबाट सरेको शंका लाग्छ ।’ हाल उनी कालीमाटीस्थित क्षयरोग निवारण संस्थामा उपचाररत छन् । आठ महिना संस्थाकै होस्टलमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
जडिबुटीका ३० वर्षीय पुरुषलाई तीन वर्षअगाडि खान मन नलाग्ने, खोकी लाग्ने र ज्वरोले सताइरहने भयो । चार महिनासम्म उनले एन्टीबायोटिक औषधि खाए । ‘जति औषधि गरे पनि निको भएन,’ उनले भने, ‘एक दिन ट्याक्सी चलाउँदा चलाउँदै रगत नै छादेँ ।’ त्यतिखेर उनी ट्याक्सीमा बिरामी बोक्ने काम गर्थे । वीर अस्पतालमा जाँच गराउँदा उनलाई क्षयरोग देखियो । ६ महिना औषधि खाएर निको पनि भए । फेरि ट्याक्सी चलाउन थालेका उनलाई एक वर्ष नबित्दै रोग बल्झियो । ‘साथीहरूले क्यान्सर लागेको भन्थे,’ उनले भने, ‘भक्तपुर अस्पतालमा पुगेर क्यान्सर टेस्ट गराएँ, साथीहरूले भनेजस्तो होइन रहेछ ।’ धेरै जाँचपछि उनलाई जटिल क्षयरोग नै भएको पुष्टि भयो । हाल उनी पनि राजधानीको एक क्षयरोग उपचार केन्द्रमा बसेर औषधि खाइरहेका छन् । २० महिना औषधि खाएपछि मात्रै उनको रोग निको हुन्छ ।
राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकअनुसार देशभर जटिल खाले क्षयरोगका ७२० बिरामी छन् । जटिल बिरामी बढ्नुले क्षयरोग नियन्त्रणमा चुनौती थपिरहेको केन्द्रका निर्देशक सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘हामी देशबाटै क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जटिल क्षयरोग बढिरहँदा हामीलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो छ ।’ नयाँ रणनितीक योजना बनाएर भए पनि क्षयरोग अन्त्य गरिने तयारी रहेको उनले बताए ।
केन्द्रका अनुसार हाल नेपालमा ३२ हजार ५०० क्षयरोगका बिरामी उपचारमा छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष क्षयरोगका ४५ हजार बिरामी थपिन्छन् । केन्द्रको आंकलन अनुसार भने नेपालमा ७० हजारको हाराहारीमा बिरामी थपिने भए पनि २८ प्रतिशत उपचारको सम्पर्कमा छैनन् । ‘सम्पर्कमा नभएका बिरामीले अन्य बिरामीलाई रोग सारिरहेका छन्,’ निर्देशक राजभण्डारीले भने, ‘लुकेका बिरामी खोजेर उपचारमा नल्याएसम्म यो रोगको अन्त्य गर्न सम्भव छैन ।’ केन्द्रका अनुसार १२ हजार बिरामी सम्पर्कबाहिर छन् ।
क्षयरोग विशेषज्ञ डा. सुवेश श्रेष्ठका अनुसार पर्याप्त उपचार नगरेकै कारण जटिल खाले क्षयरोगी बढिरहेका छन् । ‘अधिकांश बिरामी निजी अस्पतालबाट उपचार गराइरहेको हाम्रो आशंका छ,’ उनले भने, ‘निजीबाट हुने उपचार र औषधि सरकारी मापदण्डअनुसारको छैन । बीचमै औषधि छाड्ने, उपचार नै नगर्ने या गलत उपचार गरिरहने प्रवृत्तिले जटिल क्षयरोग बढिरहेको हो ।’
उनका अनुसार जटिल क्षयरोगका ३० प्रतिशत बिरामी उपचारमा छैनन् । ती बिरामीले स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि जटिल क्षयरोग नै सारिरहेका छन् । खकारको माध्यमबाट एमडीआर पत्ता लगाउने उपकरण ‘जीन एक्सपर्ट’ सबै अस्पतालमा राखेर भए पनि बिरामीलाई उपचारमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रका अनुसार हालसम्म देशका ८० ठाउँमा मात्रै जटिल क्षयरोग पत्ता लगाउने उपकरण छन् । दुर्गमका बिरामीको पहुँचमा यो सेवा नभएको डा. भण्डारीले बताए । नेपालमा क्षयरोगकै कारण बर्सेनि सात हजार बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्थात् हरेक दिन १८ जनाभन्दा बढीको मृत्युको कारण क्षयरोग हो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:२९
बागलुङमा विदेशबाट आएका ९ सय, क्‍वारेन्टाइनमा ४ जना मात्रै
गण्डकी प्रदेश सरकारले ११ जिल्लालाई डेढ करोड दिने
पहाडमा आगलागी हुँदा १५ हेक्टर वन सखाप
सहायता प्याकेज खाद्यान्‍नमा लुछाचुँडी